5 Olona luMangaliso lweNdalo lwaseYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Olona luMangaliso lweNdalo lwaseYurophu
Ubume be-Yuropu kunye nemimandla yomhlaba ikhuthaze iintsomi. Umhlaba omkhulu unamakhaya amangalisayo bentaba ezikhokelela kwimimangaliso engummangaliso kakhulu kwihlabathi. Imiqolomba emangazayo eHungary, yiGrand Canyon enamanzi abilayo eFransi, amabhotwe omkhenkce eOstriya, kunye nentaba emile okwephiramidi e-Itali, are 5 eyona intle indalo yaseYurophu.
Ezi zinto zimangalisayo zendalo ziya kuwususa umphefumlo wakho, kunye nokubonelela ngendawo entle ngeholide entle eYurophu. Nokuba unomdla wokuhamba intaba okanye uthatha intambo, la 5 Imimangaliso kukundwendwela nje nakweyiphi na uhambo oluya eYurophu, ubuncinci kube kanye ebomini.
1. Olona luMangaliso lweNdalo lwaseYurophu: Eisriesenwelt, Ostriya
Ungayikhumbula i-Salzburg evela kwiZandi zoMculo kunye nabantwana beVon Trapp becula ezintabeni. kodwa, Ngaphantsi kweentaba zeHochkogel, ifihla umqolomba omkhulu eYurophu. I-Eisriesnwelt yomqolomba eAustria yenye yezona zinto zimangalisayo zendalo zaseYurophu. Ngaphezu koko, Amagqabantshintshi kule mitha ye-3000o sq yibhotwe yomkhenkce, I-Eispalast.
Le nto yemvelo yeyona cango lomkhenkce likhulu emhlabeni, Kwaye yadalwa ngumkhenkce phantsi kwelava okanye ilitye lekalika phantsi komhlaba.
Ndingafikelela njani e-Eisriesnwelt ice caba?
Okubangel 'umdla kukuba lo mqolomba ungama-40km uhamba uhambo ngololiwe ukusuka eSalzburg, kwaye oololiwe bashiya iyure nganye. Ukongeza kwi-Werfen, kukho a 15 imizuzu 'encinci ekhwela emqolombeni. Ngaphezu, uninzi lwabakhenkethi ukuya eJamani, awufumananga lo mangaliso wendalo, ke ungangomnye wabavavanyi abakhethekileyo. Unokwenza iiyure ezi-4 ukuya phezulu okanye 3 iiyure 'zokuzola kohambo kunye nokuhamba ngemoto ngentambo.
2. Olona luMangaliso lweNdalo lwaseYurophu: I-Verdon Gorge, Fransi
IGrand Canyon yaseFransi inabela kumazantsi eProvence. Amawa athe tyaba nelitye, Yenza imvelaphi ebonakalayo kumanzi amnandi echibi. ngoko ke, igama lendalo elimangalisayo elikhethekileyo "Gorges du Verdon" lithetha iGorges eluhlaza, NgesiFrentshi.
This amazing lake in Provence is perfect for summer swimming and chilling, kunye neparadesi yokuhamba intaba. Nazi 1500 imikhondo yabakhweli abanomdla abanqwenela ukuyixabisa le mmangaliso yaseYurophu ivela ngasentla. ke, uyazikhetha ukuba Ndifuna nje ukuhlamba elangeni kwisikhephe, okanye ufumane ngeenyawo.
Ndingaya njani eGorges Du Verdon?
Eyona dolophu ikufuphi yiMoustiers-Sainte-Marie, kwaye ungafika apho ngololiwe ukusuka eParis. Emva koko yiya ekungeneni kwebhulorho iPont du Galeuits, ukungena kulo mmangaliso wendalo.
3. Olona luMangaliso lweNdalo lwaseYurophu: Matterhorn, ElamaTaliyane
IMonte Cervino eMantla ye-Itali yi 4,478 iimitha ngaphezu komgangatho wolwandle. Ukwengeza, IMatterhorn idume ngokuba yephiramidi ephantse ibe yeyona nto ifanelekileyo. IMatterhorn yadalwa ngokwendalo xa amazwe aseAfrika naseYurophu emane etsibela kwelinye. Ngenxa yokuhamba komhlaba, ilitye elizukileyo lifumene indlela ephezulu.
Ukuba ufuna amava angalibalekiyo eMatterhorn, ke uhlale kwilali ye-igloo kwisiseko seentaba. Umkhenkce nekhephu Igloo ilungiselela abahambi ubusuku obungalibalekiyo. Ukuba uyoyika ukubanda, isiselo esisebhafini siya kukugcina ufudumele njengoko uyithanda intaba entle ngobusuku obunenkwenkwezi.
Ndingayifumana njani iMatterhorn?
Lo mmangaliso wendalo kuphela kwesiqalo kuhambo lwakho olumangalisayo. Ungaya kwi-Matterhorn glacier ngo zokuhamba train ukusuka Zermatt. Esona sikhululo sikaloliwe siphakamileyo eYurophu, Unokuyixabisa kakhulu ipaneli ye-360º ye-Itali, Swizalend, no France. Oku kuthetha ukuba ungafumana umfanekiso ogqibeleleyo kuyo nayiphi na i-engile entwasahlobo, ihlobo, okanye ikhephu eligutyungelwe bubusika.
4. Iingca zeAggtelek, Hangari
Imiqolomba yeAggtelek ngummangaliso wendalo eYurophu. Igama elingaqhelekanga lithetha ‘ukuvuza kwamanzi’ avele kwinkqubo yendalo yokuvuza kwamanzi ngeli litye. Ngenxa yoko, umthombo weemilo ezintle emiqolombeni eAgtelek Ipaki yelizwe.
IBaradla Domica Cave yindawo emalunga neekhilomitha ezingama-25 ubude yokuhamba phakathi konxweme phakathi kweHungary neSlovakia. Yiyo le nto eyi Heritage World UNESCO isayithi.
Ndingaya njani eBaradla Domica Cave?
Imiqolomba yeAggtelek ziiyure ezi-4 uhambo ukusuka eBudapest notshintsho. ke, ukuba wena akunguye ukucwangcisa uhambo losuku ukusuka eBudapest, inokuba qinisisa.
5. Olona luMangaliso lweNdalo lwaseYurophu: The Black Forest, Jemani
Idumile ngemithi yayo engaqondakaliyo nexineneyo, i Ihlathi elimnyama eJamani ngummangaliso wendalo onomdla eYurophu. Uluhlu olumangalisayo lweentaba eBaden-Wurttemberg lukhuthaze amabali amaninzi, njengeentsomi zeGrimm. Kulapho uhamba ngaphandle kwedolophu yaseBaden-Baden spa, nakwihlathi elinomtsalane lamabali kunye neecuckoos.
Ukuba unomdla kwi-adventure, I-Triberg Falls, balinde indlela yehlathi elihamba ngendlela. Enye indlela enkulu yokujonga lo mmangaliso wendalo umangalisayo eJamani uhamba ngesikhokelo kuba into yokugqibela oyifunayo ilahlekile kwimihlaba enomthi omkhulu.
Ukuququmbela, la 5 ezona zimangaliso zendalo zaseYurophu zizo zonke iimfihlakalo ezinkulu zehlabathi. ke, ngokuqinisekileyo ungayihlola iYurophu njengokhenketho kwaye wenze into eyaziwayo indlela yokubona indawo, okanye ungafumana kwaye uzibonele eyona mihlaba mihle kakhulu nephefumlayo yeYurophu. kakhulu, ngokubalulekileyo, Yonke le mimangaliso yendalo iyafikeleleka ngololiwe nangezinye iindlela zokuhamba, ukusuka kwizixeko eziphakathi eYurophu.
Apha Gcina A Isitimela, we will be happy to help you find how to get by train to any of these natural wonders.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "5 yeyona Ndawo imangalisayo yeNdalo yaseYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-natural-wonders-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
naturalwonder naturalwonders ikumkhenketho train Travel mzantsiocity erentsali traintravelgermany